David Luiz oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea, kaddib markii ay xalay gaareen finalka UEFA Europa League – Gool FM
David Luiz oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea, kaddib markii ay xalay gaareen finalka UEFA Europa League
(England) 10 Maajo 2019. Daafaca kooxda Chelsea ee David Luiz ayaa doonaya inuu qandaraaska u kordhiyo kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London, kaddib markii ay xalay gaareen finalka tartanka UEFA Europa League.
32 jirkaan reer Brazil ayaa heshiiskiisa kooxda Chelsea wuxuu dhacayaa dhamaadka xili ciyaareedkan, wuxuuna wadahadalo kula jiraa kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London, si uu u saxiixo heshiis cusub.
Hadaba David Luiz ayaa ku jawaabay mar la weydiiyay su’aal ahayd hadii uu sii joogayo kooxda Chelsea xilli ciyaareedka soo socda.
“Haa, waxaan u maleynayaa in si dhakhso ah uu qof walba u ogaan doono, waxayna noqon doontaa kahor kulanka finalka ee tartanka UEFA Europa League”.
“Waan jeclahay kooxdan, wakhtiyadii ugu fiicnaa ee xirfadeyda kubadda cagta waxaan joogay halkan, gaar ahaan tartamada Yurub, ee Champions League iyo Europa League”.
“Xiriirka aan la leeyahay taageerayaasha markasta waa mid cajiib ah tan iyo maalintii ugu horeysay ee aan halkan ka ciyaaray, kaliya waxaan isku dayayaa inaan sameeyo qaab ciyaaredkeyga ugu fiican islamarkaana aan ku farxo”.
Si kastaba ha ahaatee, Finalka UEFA Europa League ayaa waxaa lagu ciyaari doonaa bishan May 29-keeda magaalada Baku, halkaasoo ay Chelsea kula ciyaari doonto kooxda ay ka wada dhisan yihiin magalada London ee Arsenal.